Booliska Uganda oo xog ka bixiyey qarax ka dhacay Kampala
Booliska Uganda ayaa sheegay in qarax dilay ugu yaraan hal qof, saddex kalena ay ku dhaawacmeen kaasi oo habeenkii Sabtida ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Uganda uu ahaa “ficil argagixiso oo gudaha ah.”
Afhayeenka booliska Fred Enanga ayaa sheegay in kooxda qaraxa fulisay ay yimaadeen maqaayad caan ah oo ku taalla waqooyiga Kampala, qiyaastii 8:30 pm habeenimo, ayaga oo qaraxa ku wada bac kadibna ay hoos dhigeen miis.
Waxyar kadib markii ay tageen, 30 daqiiqo kadib ayaa qaraxa uu dhacay, sida uu sheegay afhayeenka.
“Tuhmanayaasha waxay aaladda qarxiyeen markii ay goobta ka tageen kadib,” ayuu yiri Enanga oo weriyayaasha la hadlay, isaga oo intaas ku daray in masaamiir iyo biro ay ku jireen qaraxa.
“Dhammaan tilmaamaha waxay muujinayaan ficil argagixiso oo gudaha ah.”
Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa goor sii horreysay sheegay in qaraxa “uu u muuqdo ficil argagixiso” wuxuuna wacad ku maray inuu ugaarsan doono kuwa mas’uulka ka ah.
“Shacabka yaysan cabsan, waan ka guuleysan doonnaa dambigan, sida aan uga guuleysanay dambiyada ay galeen doofaarada aan ixtiraamka u heyn nolosha bani’aadamka,” ayuu yiri.
Enanga ayaa sheegay in kooxda qaraxa fulisay ay u muuqdeen kuwa aan xarfaan aheyn, islamarkaana dambi-baarayaasha ay rumeysan yihiin inay ugu tagi doonaan halka ay joogaan ayaga oo adeegsanaya caddeymo laga helay goobta.
Booliska ma aysan shaacin aqoonsiga tuhmanayaasha iyo sababta ku dhiiri-gelisay qaraxa.